Posted to the Web Jul 01, 10:25
Bulshada Soomaaliyeed waxaa haysta mashaakil fara badan oo isugu jira kuwa siyaasadeed, nabadgalyo, bulsho, dhaqaale iyo miskexeed (fikri). Mushkilad kastana waxay leedahay muuqaallo lagu garto iyo sabab ama asbaab kala duwan oo keentay. Waxaa kaloo dhici karta in hal mushkiladi ay sabab u noqoto mashaakil kale ama mushkilad walba ay mashaakilka kaloo jira sii xoojiso. Tusaale ahaan mashaakilka siyaasadeed waxay dhaliyaan nabadgalyo la’aan, nabadgalyo la’aantuna waxay saldhig u tahay dhaqaale burbur, dhaqaale burburkuna wuxuu wataa mashaakil badan oo ijtimaaci (bulsho) ah.
Afartaa qolo midkood wuxuu isku darsaday aqoon xumo iyo niyad xumo, midna aqoon xumo iyo niyad wanaag, midna aqoon iyo niyad xumo, midna niyo sami iyo aqoon dhiman, waxaase ka wada dhexeeya inay wax ba’shaan, waxna aysan hagaajin. Cidda shareecada wax ku xallin karta waa dad isku darsaday cilmigii diinta, kii waaqica, sidii labadaas la isu waafajin lahaa iyo waliba daacadnimo. Haddaba waxaa cad in aynaan dadkaas helin ama aynaan kaalintoodii siin, maqnaantooda ama maqnaysiintoodana wax badan inoo ka xumaadeen.
Waxaa kaloo eedda shareecada loo jeedinayo ka qeybqaatay raggii siyaasadda isku hayey, shareecadana ku wada baaqayey oo isu dhigay siday iyagu shareecadii yihiin. Tusaale ahaan ninkii doonaya in dadku isaga indho la’aan ku soo raacaan, qofka diida wuxuu ku eedaynayaa inuu midnimadii diiday ama uu jihaadka ka soo horjeedo ama uu diidan yahay dhismaha dowlad islaami ah. Qofkii diida midnimada sida aad u rabtid ama jihaadka fikradda aad ka haysatid ama dowladda aad doonaysid dhab ahaan ma aha qof diidey midnimo, Jihaad iyo dowlad islaami ah ee waa qof diidey mashruucaaga ama fikraddaada. Fikraddaan ragga is haya la yimaadeen ama ugu yaraan laga qaatay waxay dadweynaha galin kartaa cuqdad ah in shareecadii fashilantay, waana waxa cadawga diintu doonayaan.
Gabagabadii dadweynaha Soomaaliyeed waxaa la gudboon inaysan qalad dad galay diinta saarin, ugana tegin; waayo dadkaasi kama xigaan Alle, Rasuulka (scw) iyo diinta. Waxaa kaloo la gudboon in aan dad diinta la col ah qaladkaas ugu soo dhex dhuuman ee ay ka feejignaadaan. Ragga diinta ku baaqayana waxaa la gudboon inay dadweynaha u caddeeyaan inaysan iyagu diintii ahayn, waxay gafaana aan iyada loo raacan Karin xataa hadday ku ijtihaadaan, oo iyagu ajar ka helayaan; si diintu uga badbaado si xun wax u fahamka caamada iyo dhagarta uur-ka-gaalyada ulaha boocaa ugu tukubaya. Waxaa iyana caddayn uga baahan haddii fashal iyo meel ka dhac yimaado inay iyagu leeyihiin, shareecaduna beri ka tahay. Waxaa kaloo arrintaa sii caddaynaya in cid kastoo diinta ku dhaqantay dhib badan ka xallisma